Ducaysane “Cabdiwali Aniga Xilka igama qaadi karo isagoo dalka ka maqan” [Dhagayso] - Worldnews.com
GAROWE, Puntland- Agaasimhii hore la dagaallanka Burcad-badeeda Puntland, Cabdirasaaq Maxamed Dirir Ducaysane ayaa maanta ka hadlay xilka qaadistii uu ku sameeyay Madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas), taasoo soo baxday shalay.
Ducaysane oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe, ayaa faah faahin ka bixiyay
GAROOWE, Puntland- Doon nooca Kalluumaysiga ah oo ruqsad ka haysatay dowladda goboleedka Puntland, ayaa lagu qabtay waddanka Thailand iyadoo loo haysto dambi ah inay ku...
Gareowe Online 2018-02-12
Puntland: Rag Markab ku afduubtay Xeebta Caluula oo hadlay [Dhagayso]
GAROWE, Puntland- Rag Kalluumaysato ku sugan xeebaha Bari ee Puntland, ayaa wararku sheegayaan inay af-duubteen markab ku sugnaa nawaaxiga degmada Caluula. Qaar kamid ah...
Faah faahin Markabka lagu afduubtay Puntland
GAROWE, Puntland- Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa markab xalay lagu afduubtay xeebaha Puntland, kaasoo la sheegayo inuu ku wajahnaa dhinaca magaalada Muqdishu....
Puntland oo soo bandhigtay markii la af-duubtay
BOSASO, Puntland- Dowladda Puntland, ayaa maanta magaalada Bosaso xarunta gobolka Bari kusoo bandhigtay Markabkii ku gooshayay calanka dalka Sri Lanka ee lagu af-duubtay...
Gareowe Online 2017-03-19
Ragga Puntland Markabka ku haysta oo Madax-furasho dalbaday
GAROWE, Puntland- Wararka laga helayo Markab Isniintii lasoo dhaafay lagu qafaashay xeebaha Puntland, ayaa sheegaya in raggaasi dalbadeen lacag Madax-furasho aan la aqoon...
Gareowe Online 2017-03-15
Barnaamij ku saabsan Horumarka Amni ee ka jira Puntland Calimaykal 18 4 2018
WASIIRO KA TIRSAN DAWLADDA PUNTLAND AYAA MAGAALADA GAROOWE KA DAAHFURAY TABABAR LA SIINAAYO CIIDAMO
FARHIYA KABAYARE OO LA QIIROOTAY HEES CUSUB PUNTLAND IYO FANAANIINTA NORTH AMERICA 2017
Buundada waa muraayadda Waxqabadka Madaxweynaha Dawlada Puntland Dr Cabdiweli M A Gaas
GAROWE, Puntland- Wararka laga helayo Markab Isniintii lasoo dhaafay lagu qafaashay xeebaha Puntland, ayaa sheegaya in raggaasi dalbadeen lacag Madax-furasho aan la aqoon cadadkeeda. Arrintan, waxaa shaaciyay hawlgalka Midowga Yurub ee la dagaalanka burcad badeeda Somalia. Maraakiibta dagaalka ee Midowga Yurub ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa xiriir la sameeyay ragga...
​Doonyo lagu soo qabtay degmada Eyl Nugal
Saddex doonyood oo laga leeyahay dalalka Iran iyo Yemen, ayaa lagu soo qaybtay deegaan hoos yimaada degmada Eyl gobolka Nugal sida uu xaqiijiyay Taliye ku-xigeenka ciidanka Badda Puntland. Kornel Maxamud Ciise Saciid oo la hadlay Radio Garowe, ayaa sheegay in lasoo qabtay doonyahan xilli jariif ka wadeen tuulo lagu magacaabo Xaabo iyo Kabaal oo hoos timaada degmada Eyl, isagoo...
BOSASO, Puntland- Maalmahan waxaa dekedda Bosaso ee xarunta gobolka Bari taagnaa dhowr Markab oo laga leeyahay qaar kamid ah waddamada Shisheeye ee la baxa khayraadka badda Somalia. Ujeedka Maraakiibtan u yimaadeen magaalada Bosaso ayaa ah inay helaan ruqsad u sahlaysa inay si madax-bannaan uga kalluumaystaan biyaha Puntland, taasoo horay loo siiyay doonyo kala duwan. Warqaddan...
BOSASO, Puntland- Warar ka imaanaya deegaanka Xaabo ee gobolka Bari, ayaa sheegaya in dowladda Puntland wado qorshayaal ku aadan sidii loosoo furan lahaa Markab ku gooshayay Calanka dalka Sri Lanka, balse ay maamusho shirkad fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka. Guddoomiyaha degmada Caluula, Cali Shire Maxamud, ayaa warbaahinta u sheegay inay jirto is-rasaasayn dhex-martay...
Muxuu ahaa Markabka lagu af-duubtay xeebaha Soomaaliya?
Dad looga shakisan yahay inay yihiin burcad badeed Soomaali ah ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay xeebaha Soomaaliya ka kaxaysteen markab u socday magaalada Muqdisho. Markabkan oo ay saarnaayeen sideed howlwadeen ayaa mar qura waxaa ka go'ay is...
☼✔Waxaad Ku Soo Dhawaataan Qoslaye Video Production Chanel Si aad ula socoto wixii macluumaad ah ee Dunida Fadlan ✔Subscribers ✔Share ✔Comments ✔Like✔☼ Thanks...
☼✔Waxaad Ku Soo Dhawaataan Qoslaye Video Production Chanel Si aad ula socoto wixii macluumaad ah ee Dunida Fadlan ✔Subscribers ✔Share ✔Comments ✔Like✔☼ Thanks